Forex သတင်းများ | FXCC နှင့်အတူငွေကြေးစျေးကွက်ထံမှဘဏ္ဍာရေးအပ်ဒိတ်များ
ပင်မစာမျက်နှာ / အကြောင်းအရာ / FXCC အကြောင်း / ကုမ္ပဏီသတင်းများ
ကုမ္ပဏီသတင်းများ & ထရေးဒင်းကြေညာချက်များ
ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်မြင့်မားသောအတိုးရန်, FXCC အဆိုပါအပိုဆုကမ်းလှမ်းမှုကိုအောက်တိုဘာလတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client နှင့်မိတ်ဖက်အကြောင်းကြားရန်ဝမျးသာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဆုကြေးငွေမြှင့်တင်ရေးလအတွင်းလုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုသိုက်များအတွက် 100% ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဆုကြေးငွေနှင့်အတူ 50% Start ကို-Up ကိုဆုကြေးငွေပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကဖောက်သည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သိ clients များဆုချီးမှာရည်ရွယ်ထား! ထိုအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်မှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျနော်တို့ကိုမှန်ကန်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ငွေသားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သိကုန်သည်များဆုချဘယ်မှာပြန်အမ်း, ဝင်ငွေနေကြသည်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
သင်ဤမြှင့်တင်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သငျသညျသေးအကောင့်တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်စတင်ရန်။
ပြီးသား FXCC နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း clients အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးပူးပေါင်း ဆုကြေးငွေတောင်းဆိုဖို့ဘယ်အချိန်မဆိုကြိုဆိုပါတယ်ကြသည်!
မဟုတ်တဲ့အီးယူ clients များကြိုဆိုပါတယ်အသစ် site ကိုဖွင့်လိုက်ပါ FXCC
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာလက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အမြဲ drive ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, FXCC ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟုတ်တဲ့အီးယူဖောက်သည်ဖြည့်တင်းမည်ကိုအသစ်တခုကုန်သွယ်က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါပြီ, ဒါမှမဟုတ်ဥရောပ clients များအီးယူအနေဖြင့်အဆိုပါရည်မှန်းချက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မဟုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်လုံခြုံကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်စဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူ access ကိုဆက်ကပ်။
ခပ်သိမ်းသောကာလင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်ရိုးသားမှုကိုအလေးပေးနေချိန်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့ Forex ဈေးကွက်ဝင်ကုန်သည်များ၏တိုးပွားလာယူခြင်း, ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်ထုတ်ကုန်ပူဇော်, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကုန်သွယ်အခြေအနေများကို enable ရန်တာဝန်အပျေါမှာယူကြပြီ။
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးကြိုဆိုပွဲနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖြေလျှော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေစဉ် Forex စျေးကွက်မှရယူသုံးပါ။
တရုတ် Forex ကုန်သည်များအတွက်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ China Union Pay ကိုပစ်လွှတ်
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက China Union Pay နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုနှင့်အကောင့်ရန်ပုံငွေ option ကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒီဆက်ဆံရေးအသစ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ကျနော်တို့ FXCC ရဲ့ ECN FX ကုန်သွယ်မော်ဒယ်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှု, ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်အဖြစ်အာရှနိုင်ငံများအနေဖြင့်အသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ FX ကုန်သည်များခွင့်ပြုတဲ့တံခါးပေါက်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။
တရုတ် UnionPay 2002 တည်ထောင်ခဲ့ကုမ္ပဏီကိုယခုရုံအောက်မှာတဆယ်ငါးနှစ်အတွင်းအဆစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ China Union Pay MasterCard နဲ့ Visa နောက်ကွယ်မှ, လုပ်ငန်းများ၌နှစ်စဉ်ငွေပေးငွေယူတန်ဖိုးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးငွေပေးချေမှု service provider ကအဖြစ်တတိယအဆင့်။ ကြောင့်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်၎င်း၏ကျောထောက်နောက်ခံမှ CUP လေးပါးကိုအဓိကတရုတ်ပြည်တွင်းဘဏ်များများအတွက်ဦးစားပေးငွေပေးချေ service provider ကဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယင်းကျယ်ပြန့်လူသိများနှင့်မကြာခဏ "Union Pay" သို့မဟုတ် "CUP" ကိုရည်ညွှန်းသည်အတိုင်း, service provider ကယခုတကမ္ဘာလုံးငါးဘီလီယံအထိကတ်များအပေါ်အနီးကပ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ China Union Pay ယခု 150 နိုင်ငံများတွင်ကျော်နှင့် 2009 Union Pay ချေမှုကတ်ပြားကိုင်ဆောင်ဗြိတိန်အတွက် Link ကိုစက်တွေကိုဝင်ရောက်နှင့်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးလွယ်ကူသောထုတ်ယူဘို့မိမိတို့ကတ်များသုံးစွဲဖို့နိုင်ကြပါပြီကတည်းကအတွက်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုလက်ခံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
China Union Pay လျှင်မြန်စွာဦးစားပေးဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်တရုတ်ဒေသခံများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းအဝယ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့အတှကျပြည်တွင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ China Union Pay မှအလယ်ပိုင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ bankcard စက်မှုလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကအစတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကဒ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကစားပါတယ်။
FXCC မှာကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုအာရုံစူးစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးရှုထောင့်များတွင်တိုးတက်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း MetaTrader platform များမှတဆင့် FX ကုန်သွယ်မှုနိုင်ဖို့အတွက်အလွယ်တကူသူတို့၏အကောင့်ရန်ပုံငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖွင့်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အသစ်ကအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်, အကောင့်သစ်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်။